आखिर हामी किन बोल्छौं झुट, बानी हो वा अरु ? – Sodhpatra
...भाषाको उत्पत्तिसँगै झुट बोल्नु हाम्रो...
प्रकाशित : ७ श्रावण २०७८, बिहीबार २२:२७ July 22, 2021
तर सोचौं त, तपाईं-हामीले कहिल्यै झुट बोलेनौं ?
सबैभन्दा बढी झुट कसले बोल्छन् होला ? हामीले देखे-भोगेका छौं, नेताहरुले । नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ र प्रभाव कायम राख्नका लागि झुटको साहारा लिन्छन् ।
अमेरिकाको पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकै कुरा गरौं । उनले के दावी गरेका थिए भने आफ्नो शपथग्रहण समारोहमा ऐतिहासिक भिड जम्मा भयो । तर, वाशिङटन पोस्टले ‘फ्याक्ट चेक’बाट पत्ता लग्यो कि, फोटोशपको माध्यामबाट भिड देखाएर ट्रम्पले त्यस्तो हल्ला फैलाएका थिए ।
भारतमा साथीले अम्बामा नुन हालिदिएकै भरमा छुरी प्रहार गरी हत्या !
निषेधाज्ञा तोड्ने दुलाहा घोक्र्याइए, बैवाहिक समारोह सञ्चालन गर्ने अविभावक पक्राउ
८० वर्षका यी वृद्ध ३१ वर्ष यता खाइरहेका छन् ढुङ्गा